Relay mataanuhu magnetic
Power Relays Sare
Solid Relays State
Korontada kWh Meter Kooban
NCR waxaa la aasaasay sanadkii 2003, sida mid ka mid ah soo saarayaasha Relay keentay in Shiinaha leh in ka badan 600 oo shaqaale. Waxaan nahay deeqsi ah, waayo maal qalabka wax soo saarka ugu horumarsan iyo technology dunida oo dhan. Saarka sanadeedku waa in ka badan 100 milyan oo gogo '.
Kala duwan oo ka mid ah Product electromagnetic Relay, Qabsashada Relay, Relay godka, Solid State Relay, Power Semiconductor Module iyo Bridge Rectifier iwm
Under ISO9001: 2000, ISO14001: 2004 & System Tayo OHSASA18001, waxaan heleen CCC, CQC, CE, UL & TUV ansixinta iyo sidoo kale RoHS shahaadada waafaqsaneyn. Iyada oo ku saleysan oo tayo leh oo lagu kalsoonaan karo, iyo sidoo kale adeegga macaamiisha u fiican, waxyaabaha aannu si fiican u iibiyey oo dhan dhulweynaha China iyo caalamka oo dhan.
Si loo gaaro horumarka waara ee suuqyada caalamiga ah, waxaan ku adkaysanayaan doonaa maanka maamulka "Integrity & sarrayntiisa", si ay ugu deeqdo alaabta lagu kalsoonaan karo, adeeg ka xoogbadan-iib aheyn ka dib iyo gaarsiinta on-time si ay u buuxiyaan baahida dhammaan macaamiisha adduunka oo dhan.